China Frozen Meat Dicer DRD350 orinasa sy mpamatsy | Chengye
Ny dicer hena mangatsiaka DRD350 dia azo ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny sakafo malaky mangatsiaka.
Azo ampiasaina hanodinana saosisy avo lenta (ohatra: salami).
Azo ampiasaina amin'ny lovia eo an-dakozia afovoany;
Azo omena amin'ny fivarotana lehibe amin'ny fanapahana koba sy fromazy ary tsipika.
Karazana Hery (Kw) Fahafahana (kg / h) Dicing Size (mm) Lafiny ivelany (mm) Lanja (kilao)
Fanasongadinana ara-teknika: Miorina amin'ny fiheverana ny famolavolana modular, DRD350 Frozen Meat Dicer dia misy modely valo ---- Module Knife, Module Drive, Module Power, Module fanaraha-maso elektrika, Module Feed, Module famoahana, Module Frame, Module fiarovana.
Ny singa module tsirairay dia azo ampiasaina amin'ny famokarana maridrefy tsirairay. Ny milina dia azo hatsangana amin'ny alàlan'ny fanangonana ireo rafitra maoderina tsirairay. Ny famokarana modularization batch dia ahafahana manasaraka ny asa, fiaraha-miasa izay mampihena ny vidin'ny famokarana. Mandritra izany fotoana izany, ny faritra azo ovaina dia miantoka ny fahamendrehan'ny fitaovana amin'ny fitaovana, ary avy eo dia miantoka ny fahombiazan'ny fanapahana tsara sy ny fiasan'ny milamina miaraka amin'ny tabataba ambany ihany koa. Izy io koa dia manadihady ny famahana olana, izay mampihena be ny fahasahiranana amin'ny fikojakojana ny milina sy ny famahana olana.
Ireto ny hevi-dehibe momba ny famokarana modérationation dia ireto manaraka ireto:
Ny modely antsy manasaraka dia mahatonga ny zoro fanapahana tonga lafatra, ary miasa miaraka amin'ny famolavolana ny zoro elatra propeller, izany rehetra izany dia miantoka ny fahamendrehana sy ny fahombiazan'ny cubes.
Ny maodelin'ny fiara tokana tena marina dia tsy vitan'ny hoe mahomby kokoa ny rafitra fiara, fa mampihena ny olana miafina amin'ny fitaovana.
Module famahanana sy famoahana:
Ny seranan-tsakafo sy ny fivoahana dia mandray vy tsy manara-penitra austenitika, ny vy tsy misy fangarony ary ny volavolan'ny fomba fanitsiana ny hateviny dia mandinika tsara ny ergonomika, izay mahatonga azy io ho tsara tarehy sy mora ampiasaina.
Modely fiarovana, Module fanaraha-maso elektrika, Module frame:
Ireo fizarana telo ireo dia manaraka ny foto-kevitra famolavolana tsotra sy matevina, izay mampihena be ny habaka fonenan'ireo fitaovana.
Temperature mety amin'ny hena samihafa rehefa manapaka cubes sy silaka:
Kubes akoho sy sombin'akoho:
Koba: -3 ℃ ~ -8 ℃
Soso: 0 ℃ ~ -3 ℃
Kubes sy kisoa kisoa:
Koba: -3 ℃ ~ -6 ℃
Soso: -3 ℃ ~ -6 ℃
Kubes sy slices ny hen'omby / henan'omby:
Koba: -4 ℃ ~ -6 ℃
Soso: -3 ℃ ~ -7 ℃
Ny antsy manitsy tsy voafetra tsy voatanisa dia manapaka ny vokatra amin'ny tsipika.
Manaraka izany, ireo antsy boribory dia nanapaka ireo silaka ho tsipika. Farany, ny spindle antsy dia manapaka dices madio amin'ny haavony irina.
Vokatry ny fanapahana
Vokatry ny fanapahana hena
Teo aloha: OEM mpanamboatra trondro sy hena fanapahana hena - Smokehouse - Chengye
Cuber Dicer Droit be dia be
Fitaovana mpihinana hena be sandry
Tsipika fanetezana hena malemy